သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်: ယုံကြည်ချက်နှင့် အသက်ရှင်သည်။ (ဘာသာပြန်သူ- မိုးမိုး (အင်းလျား))
ယုံကြည်ချက်နှင့် အသက်ရှင်သည်။ (ဘာသာပြန်သူ- မိုးမိုး (အင်းလျား))
အနိုင်ယူဖို့ရယ် လက်မြှောက် အရှုံးပေးဖို့ရယ် ဆိုတာတွေဟာ
ငါ့အတွက် မဟုတ်ဘူးလို့ ငါယူဆထားတယ်။
ရေထဲကို အဆုံးတိုင် နစ်မြှပ်ပစ်လိုက်မယ် ဆိုတာတောင်
ငါ့မှာ ရှိသမျှကို ငါလောင်းဝံ့တယ်၊
ငါဟာ ဆုံးရှုံးမှုတွေ အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ပြီး
ငါ ယုံကြည်ပြီးသားမို့ဘဲ။ ။
( တဂိုးရဲ့ စာနုယဉ်ကို မိုးမိုး(အင်းလျား) ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ ဘယ်ထဲကနေ ကျမ ကူးထားမိမှန်း မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို သူများက ရှုံ့းစေချင်တဲ့အခါ ၊ ကိုယ် ငိုနေတာကိုကြည့်ချင်နေတဲ့ လူတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အားဖြည့်တဲ့အခါ.. ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာလေး ဆိုပါတော့...)
Posted by tg.nwai at 1:05:00 PM
Lables, ကဗျာ၊ (ဘာသာပြန်)
ဖတ်ပြီး အားလေးနည်းနည်းတက်သွားပါတယ် မသိင်္ဂီ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဓိပတိထားတယ်ပေါ့ ကောင်းတယ် သူငယ်ချင်း... တို့တော့ ယောင်ဝါးနေဆဲ...
မသီဂီ င်္ ...
Just Look back. I'm right behind you.
Whatever you face, you'll be alwaysawinner if you can control inner world.
အားရှိစေတဲ့ စာတစ်ပုဒ် အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စစ်တမ်းကို လာဖြေသွားတဲ့ အတွက်ရောပါပဲ။ နောက်မှ စိတ်ကြိုက် အကြာကြီး စာလာဖတ်ဦးမယ်။ ဖတ်ချင်တာတွေ များလွန်းလို့။